AH: လေ့လာမှတ်သား အင်ဂျင်နီယာလောကရဲ့ စကားများ
“ကျွန်တော်တို့ဟာ မဖြေရှုင်းနိုင်တဲ့ ပြသနာများလို့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ ဖုံးကွယ်နေတဲ့ အခွင့်အရေးကြီးကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်”
“၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသော သင့်ရဲ့ အချိန်တွေကို ပြသနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့အတွက်အာရုံစိုက်ပါ။ ကျန်တဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ ပြသနာတွေ အတွက်ထားပါ”
အန်တိုနီ ဂျေ ဒီအန်ဂလို
“Engineers like to solve problems. If there are no problem handily available, they will create their own problems.”
“အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ အကယ်လို့ လက်ထဲမှာ ပြသနာတစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာ ပြသနာ အသစ်တွေကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတော့တာပါဘဲ”
“ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြသနာတွေကို အဲ့ဒီ ပြသနာတွေ ဖြစ်ပွားအောင်ဖန်တီးခဲ့သူတွေရဲ့ တွေးခေါ်နိုင်မှု့အဆင့်လောက်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့မရဘူး။”
“လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ လျှပ်စစ် စက်တွေ ပြသနာဖြေရှင်းလို့ရအောင် ပြသနာတွေကို ဆက်လက်ပြီး အစီအစဉ်ချထား ပြင်ဆင်ထားရမယ်”
“Understand that most problems areagood sign. Problems indicate that progressing is being made, wheels are turning, you are moving towards to goal. Beware when you have no problems. Then you’ve really gotaproblem…. Problems are like landmarks of progress.”
“နားလည်ထားတာကတော့ များစွာသော ပြသနာတွေဆိုတာ အပေါင်းလက္ခဏာ ကို ဆောင်တယ်။ ပြသနာတတ်တယ်ဆိုတာက ရှေ့တိုးသွားနေလို့၊ ဒီစက်ဝန်းကြီးတွေဟာ လည်နေလို့၊ သင်ဟာ သင့်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ ရှေ့သို့ ခရီးဆက်နေလို့။ ဘာပြသနာမှ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင်သတိထားပေတော့။ ဘာပြသနာမှ မရှိဘူးဆိုတာကိုက သင့်မှာ ကြီးမားတဲ့ ပြသနာတစ်ခုရှိနေပြီ။ ပြသနာတွေဆိုတာ တို့တက်မှု့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ မှတ်တိုင်တွေနဲ့တူတယ်။”
“ကျွန်တော်ဟာ တော်နေလို့မဟုတ်ဘူး၊ ပြသနာတွေကြားထဲမှာ နေတာကြာလို့”
“With engineering, I view this year’s failure as next year’s opportunity to try it. Failures are not something to be avoided. You want to have them happen as quickly as you can, so you can make progress rapidly.”
“အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်နဲပတ်သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ ဒီနှစ်မှာ မအောင်မြင်ခြင်း၊ကျရှုံးခြင်းဆိုတာ နောက်နှစ်အတွက် ထပ်မံကြိးစားရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ မအောင်မြင်ခြင်း၊ ကျဆုံးခြင်းတွေဟာ ရှောင်လွှဲလို့ရတဲ့ အရာတွေ မဟုတ်ဘူး။ သင်ဟာ ဒီအရာတွေကို မြန်နိုင်သလောက်မြန်အောင် လုပ်ချင်ဖို့လိုတယ်။ ဒါမှသင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်မှာ။”
“If you don’t have mistakes, you’re not working on hard enough problems. And that’sabig mistake.”
အကယ်၍သင့်မှာ အမှားမရှိဘူးဆိုတာ သင်ဟာ ပြသနာတွေရှင်းရလောက်အောင် အလုပ်မလုပ်ဖူးလို့ဘဲ။ အဲ့ဒါကပဲ ကြီးမားတဲ့ မှားယွင်းမှု့တစ်ခု။
ဘာသာပြန်တာ ညံဖျင်းလှတဲ့အတွက် လွဲမှားမှု့များရှိရင် သည်းခံဖတ်ပေး၊ အကြံလေးများ ပေးကြပါ။
သြော်…. ဘ၀ … ဘ၀
No Problem at all.............. (ဒါက အလုပ်ခွင်ထဲမှာ မြင်တွေ့နေရတာလေးတွေနဲ့ တူလို့ ဒီပိုစ့်ထဲမှာ ရောထည့်လိုက်တာပါ)။
Source : http://www.etgiftstore.com/items/all-products/clearance/engineering-quotes-matted-detail.htm
Posted by AH at 8/30/2011 02:05:00 PM